को हुन समानुपातिक सांसद हिमाली गोले ? « Ramechhap News
दोलखा जिल्ला क्षेत्र नम्बर १ बाट समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा सिफारिस भएकी हिमाली गोले प्रदेश नम्बर ३ बाट समानुपातिका सांसद बनेकी छिन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले गोलेलाई आदिवासी जनजातिको महिलाको एक नम्बरमा बन्द सूचीमा समावेश गरेको थियो ।
आमा काइली गोले र बुबा रामबहादुर गोलेको कोखबाट २०३७ साल ६ महिना १ गते दोलखा जिल्ला साबिक गैरिमुदी गाविस–१ र हाल वैद्येश्वर गाउँपालिका–१मा जन्मिएकी गोले सानै उमेरदेखि विद्राही स्वभावकी थिइन । एसएलसीसम्म अध्ययन गरेकी गोले शहीद रितबहादुर खड्का र शहीद (बुबा रामबहादुर गोले)को प्रेरणाको कारण राजनीतिमा होमिएकी थिइन ।
तस्बीरः विकासदेव लामा
तत्कालिन जनयुद्धको समयमा माओवादीले रामेछापस्थित खिम्तीको बैंक आक्रमण गरेपछि तत्कालिन अवस्थामा सांसद गोलेलाई प्रहरीले यातना सहित सामुहिक वलात्कार गरेको थियो । प्रहरीको दिएको मानसिक र शारीरिक यातना, समाजमा देखिएको विभेद अन्याय अत्याचारको विरुद्ध २०५६ सालमा जनयुद्धमा होमिएकी थिइन ।
१८ बर्षको कलिलै उमेरमा प्रहरीको सामुहिक वलात्कारको पीडा सहन बाँध्य भएकी गोलेले जनयुद्धको समयमा दजनौ मोर्चामा बालबाल बाँचेको रामेछाप न्युजलाई बताइन । जनयुद्धको समयमा दोलखामा रहेर अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)को उपाध्यक्ष भए काम गर्दै २०५७ सालमा जनमुक्ति सेनामा सहभागी भएर काम गरेको उनले बताइन ।
दोरम्बा चौकी आक्रमण, ठोर्कपा, मैनापोखरी, धोवी, सोलु सल्लेरी, भोजपुर, चैनपुर, बन्दीपुर, हुँदै सर्लाहीको मंगलवा लगायतका दर्जनौ मोर्चामा एम्बुस छल्दै बालबाल बचेको सम्झिदै उनले रामेछाप न्युजसँग भनिन,‘चैनपुर आक्रमणमा महिला सेक्सन कमाण्ड म नै थिए,अगाडिको साथी ढल्नु भो, मसँगै रहनुभएको पछाडिको साथी पनि ढल्नु भो, म भने बाँँच्न धन्न सफल भए ।’
काभ्रेको मादनकुडारीमा सेनाले लखेटदा मस्याङबारीमा लुकेर बाँचेको पनि उनले स्मरण गरिन । कम्पनी कमिसारको जिम्मेवारी पूरा गरेकी गोलेले २०६२ सालमा रामेछापका जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर सुमन लामासँग जनवादी विवाद गरेकी थिइन । उनी अहिले दोलखाबाट समानुपातिका सांसद बनेपनि रामेछापकी बुहारी भएकी छिन् । सांसद गोले हाल अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीको केन्द्रीय सदस्य र तामाङ मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य रहेकी छिन् । यसै विषयमा रामेछाप न्युजको लागि सांसद गोलसँग गरिएको कुराकानीः–
तपाईलाई पार्टीले समानुपातिक सांसद बनाएको छ कस्तो लागेको छ ?
–हिजो वर्ग संघर्षको भट्टीमा सर्ववहारा वर्गको लागि लडियो । अहिले यहाँसम्म संघर्ष गरेर आएको छु । जनताको हित र सर्वहारा वर्गको हितको लागि काम गर्छु । जनताको सपना पूरा गर्ने बाटोमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने छु । समाजवाद लक्ष्य बोकेर हिजो बन्दुक बोकेर हिडियो अहिले क्रमश लक्ष्य प्राप्तको बाटोमा देश अगाडि बढेको छ । पार्टीले विश्वास गरेर सांसद बनाएको छ । खुसी छु ।
प्रदेशमा रहेर कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
प्रदेश सभामाको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न भूमिका खेल्छु । पार्टीले विश्वास गरेर सांसद बनाएको छ । म देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छु । जनताको मतलाई आत्मसाथ गरेर काम गर्छु ।
मलाई पार्टीले दोलखाबाट समानुपातिकको सूचीमा सिफारिस गर्यो । सिंगो ३ नम्बर प्रदेशका जनताले दिएको मतबाट नै म समानुपातिक सांसद बन्न सफल भएको छु । सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
पद छाडेर रामेछापमा नेकपा बचाउन लागेको हुँः रोशन पाख्रिन
प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै नेकपा दुई समुहमा विभाजित हुन पुगेको छ । विभाजनको असर केन्द्रदेखि वडा
खाँडादेवी गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन रातदिन लागि परेका छौः अध्यक्ष तामाङ
स्थानीय सरकार गठन भएको तीन बर्ष पूरा भएको छ । स्थानीय तहको सरकारले तीन बर्षको
रामेछाप गोकुलगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग बहादुर सुनुवारले गाउँपालिकाका ११ जना कोरोना संक्रमितलाई रिपोर्ट आउनु अघि
कोरोना जितेका रामेछापका श्रेष्ठ भन्छन–निको हुन्छ कोरोनासँग डराउन पर्दैन
झण्डै दुई महिना घरमा बसेर काठमाडौ आएका रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिका–१ राकाथुमका लाक्पा श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन)
सर्वोच्चको आदेशले कुलमानलाई सहज, यस्तो छ अदालतको आदेश
५ असोज, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च
हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको अवरोध हटाउन स्थलगत अनुगमनमा कुलमान
५ असोज, काठमाडौं । मुलुकभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापारका लागि निर्माणाधीन
एमाले खाँडादेवी गाउँ कमिटीको संयोजकमा कार्की र सचिवमा तामाङलाई नै निरन्तरता
४ असोज, रामेछाप । नेकपा एमाले खाँडादेवी गाउँ कमिटीको भेलाले पुरानै कमिटीलाई अधिवेशन आयोजक किमिटी